सीके राउतकाे जिवनमा ३ भाषामा फिल्म बन्ने, रिलिज मित्तिकाे घाेषणा
पाेखरा ।सिके राउतमाथि सिनेमा बन्ने पक्का,लामो समय अगल मधेश राज्य माग गर्दै गत वर्ष नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आएका राउतको जीवनमाथि बन्ने ‘डा. सिके राउत’ सिनेमाको मंगलबार राजधानीमा घाेषण र सिनेमलाई नेपाली, हिन्दी तथा भोजपुरी गरी ३ भाषामा रिलिज गरिने जानकारी दिएका छन्।
एउटा मान्छे किन विद्रोहमा उत्रिन्छ भन्ने कुरा सिनेमामा देखाइने सिके राउतको भनाइ छ । ‘सिनेमा निर्माण गरेपछि चल्नु पनि पर्छ । सिनेमालाई दुई दर्जन बढी भोजपुरी सिनेमाको निर्देशन गरिसकेका निर्देशक सन्तोष शाहले सिनेमाको निर्देशन गर्दैछन् ।
भदौबाट सिनेमाको छायांकन सुरु हुनेछ भने आउँदो छठ पर्वमा रिलिज गर्ने तयारी निर्माण टिमको छ । सिनेमामा सिके राउतको भूमिका भोजपुरी सिनेमाका ‘पावर स्टार’ परिचित परदेशी शाहले निर्वाह गर्नेछन् । उनी सुपरहिट सिनेमा ‘एस.पी खरेल’ बाट निकै चर्चामा आएका थिए ।
‘डा. सिके राउत’ मा पुकार भट्टराई, ध्रुव कोइराला, विशाल पहारी, किरण थापा, राजिव कर्णलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ । सिनेमालाई कमर्शियल बनाउन सिके राउतको जीवनको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत काल्पनिक कथा जोडिने बताइएको छ ।
सिनेमाको टीजर हेरेपछि सन्तुष्ट देखिएका सिके राउतले मधेश आन्दोलनमा आफूले गरेको संघर्षको कथामा सिनेमा निर्माण हुने बताए । त्यसैले कमर्शियल बनाउन सिनेमामा केही काल्पनिक दृश्यहरु पनि जोडिनेछ’, उनले सिनेमालाई सिनेमाकै रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै अगाडि भने, ‘सिनेमामा केही विवादस्पद कुरा पनि आउन सक्छन् ।